Thwebula BitTorrent 3.28.233 – Android – Vessoft
BitTorrent – a isofthiwe enamandla ukulanda amafayela zezifufula. Izici main of the software zihlanganisa: setting ijubane ukulandwa and ukulayisha, ukulandwa ngokuzenzekelayo amafayela ngokusebenzisa isiphequluli, ukulanda kuphela ngokusebenzisa inethiwekhi Wi-Fi, izithombe amafayela enkulu njll BitTorrent kwenza ukuba ukucinga amafayela on popular sesifufula sites ngokusebenzisa isiphequluli. Isofthiwe futhi likuvumela kubonisa indawo ukusindisa amafayela sesifufula uhlu yokulandwayo.
Ukulandwa of amafayela zezifufula
Ukucinga on popular sites sesifufula
Amazwana on BitTorrent:
BitTorrent Ahlobene software:
Sesifufula Popular ithuluzi thwebula amafayela sesifufula. Isofthiwe baxhumana yelucwaningo ukwenza Ukucinga Okusheshayo amafayela ezidingekayo.